वित्तिय प्रकार्य भाग एक
यो कोटिले LibreOffice क्याल्क को गणितीय वित्तीय प्रकार्य समाहित गर्दछ.
आवधिक भुक्तानीहरूको केसमा सुरक्षणले कमाएको ब्याज गणना गर्दछ ।
निस्काशन: सुरक्षणको निस्काशन मिति ।
पहिलो ब्याज: सुरक्षणको पहिलो ब्याज मिति ।
अवस्थापन: त्यो मिति जसमा व्याज गणना नभए सम्म प्राप्त भइरहन्छ ।
२.२८.२००१ मा सुरक्षण जारी गरिन्छ । पहिलो ब्याज ८.३१.२००१ का लागि सेट गरिन्छ । बन्दोबस्त मिति ५.१.२००१ हो । दर ०.१ वा १०% र अंकित मूल्य १००० मुद्रा एकाइ हुन्छ । ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक (आवृत्ति २) हुन्छ । यो US विधिमा आधारित विधि हो । यसले कति ब्याज कमाउँछ ?
=ACCRINT("2.28.2001"; "8.31.2001"; "5.1.2001"; 0.1; 1000; 2; 0) ले १६.९४४४४ फर्काऊदछ।
बन्दोबस्त मितिमा एउटा अन्तिम भुक्तानीको केसमा सुरक्षणको पाउनु पर्ने ब्याज गणना गर्दछ ।
दर: ब्याजको वार्षिक अवास्तविक दर (कुपन ब्याज दर) ।
एउटा सुरक्षण ४.१.२००१मा निस्काशन गरिन्छ । परिपक्व मिति ६.१५.२००१का लागि सेट गरिन्छ । दर ०.१ वा १०% र अंकित मूल्य १००० मुद्रा एकाइ छ । दैनिक / वार्षिक गणना दैनिक मौज्दात (३) छ । पाउनुपर्ने ब्याज कति हुन्छ ?
=ACCRINTM("2001-04-01";"2001-06-15";0.1;1000;3)ले २०.५४७९५ फर्काउँदछ ।
घट्दो अमोट्राइजेसनको रूपमा किस्ताबन्दी अवधिका लागि ह्रास कट्टीको रकम गणना गर्दछ । अव्यवहारिक AMORLINC, ह्रास कट्टी गुणांक जसमा यहाँ प्रयोग भएको ह्रास कट्टी योग्य जीवनमा निर्भरहुन्छ ।
लागत: प्राप्ति लागत ।
मिति खरीद गरियो: प्राप्ति मिति ।
पहिलो अवधि: पहिलो अवस्थापन अवधिको समाप्ति मिति ।
शेष : ह्रास जीवनको समाप्तिमा पूँजीगत सम्पत्तिको शेष मान ।
अवधि: विचार गर्नुपर्ने अवस्थापन मिति ।
दर: ह्रास दर ।
रेखाक्रम अमोट्राएजेसनको रूपमा किस्ताबन्दीका लागि ह्रास कट्टीको रकम गणना गर्दछ । पूँजी गत सम्पत्ति किस्ताबन्दी अवधिमा खरीद गरिएको खण्डमा ह्रास कट्टीको समानुपातिक रकम सोच विचार गरिन्छ ।
निर्दिष्ट अवधिका लागि सङ्ख्यात्मक-घट्दो क्रम विधि प्रयोग गर्दा सम्पत्तिको ह्रास कट्टी फर्काउँदछ ।
यदि ह्रास कट्टी (रेखतमक ह्रास कट्टीको विपरित)को सुरुमातपाईँंले धरै ह्रास कट्टीको मान पाउन चाहेको खण्डमा यो ढाँचाको ह्रास कट्टी प्रयोग गरिन्छ । सुरुको लागतबाट पहिलेनै घटिसकेको ह्रास कट्टीद्वारा प्रत्येक अवधिको ह्रास कट्टी सहित ह्रास कट्टी मान घट्टछ.
जीवन जीवनले अवधि भरिको परिभाषित गर्दछ जुनचाँहि समयमा सम्पतिको ह्रास कट्टी गरेको हुन्छ ।
अवधिप्रत्येक अवधिको लम्बाइ हो । ह्रास कट्टी अवधिको रूपमा उही मिति एकाइमा लम्बाइ प्रविष्टि गर्न जरुरी हुन्छ ।
माहिना (विकल्प) पहिलो वर्षको ह्रास कट्टीका लागि महिनाहरूको सङ्ख्या तोक्दछ । यदि प्रविष्टि परिभाषित नभएको खण्डमा पूर्व निर्धारितको रूपमा १२ प्रयोग गरिन्छ ।
रेखात्मक ह्रास कट्टीमा विपरितको रूपमा धैरै अगाडिको ह्रास मान आवश्यकता परेको खण्डमा ह्रास कट्टीको यो फाराम प्रयोग हुन्छ । प्रत्येक अवधिमा ह्रास कट्टीमा कम पाइन्छ र यो प्रा गरेर सम्पतिहरू मा प्रयोग हुन्छ जसको मान खरीद पछाडि धेरै कडाइका साथ घटेको हुन्छ (उदाहरणहरूका लागि, वाहनहरू, कम्प्युटरहरू)। कृपया द्रष्टव्य गर्नुहोस् जसको किताब मान यो प्रकारको गणना मा कहिल्यै पनि ० मा पुग्दैन ।
लागत सम्पतिको सुरुको लागत निश्चित गर्दछ ।
बचेको सम्पतिको जीवनको अन्त्यको मान निश्चित गर्दछ ।
जीवन सम्पति कति लामो समय सम्म प्रयोग हुन्छ भन्ने अवधिहरूको परिभाषित सङ्ख्या हो.
अवधि अवधिको लम्बाइ परिभाषित गर्दछ । उही समय एकाइमा जीवनको रूपमा लम्बाइ प्रविष्टि गर्न जरुरी छ ।
तत्व (विकल्प) तत्व हो जसको करण ह्रास कट्टी घट्दछ । यदि मान प्रविष्टि नगरेको खण्डमा पूर्व निर्धारित तत्व २ हुन्छ ।
एउटा कम्प्युटर प्रणाली जसको सुरुको लागत ७५,००० मुद्रा एकाइ जसको मासिक रूपमा ५ वर्षका लागि ह्रास कट्टी गर्नुपर्ने छ । ह्रास कट्टीको अन्त्यको मान १ मुद्रा एकाइ हुन्छ । तत्व २ हुन्छ ।
DDB(७५०००;१;६०;१२;२) = १,७२१.८१ मुद्रा एकाइ । त्यसकारण, दोहोरो घट्दो ह्रास कट्टी पहिलो महिनाको अवधिका लागि खरीद पछाडि १७२१.८१ मुद्रा एकाइ हुन्छ ।
प्रतिशतको रूपमा सुरक्षणको भत्ता (छुट) गणना गर्दछ ।
मूल्य: अंकित मानको प्रत्येक १०० मुद्रा एकाइ सुरक्षणको मूल्य ।
छुटकारा: अंकित मान प्रत्येक १०० मुद्रा एकाइ सुरक्षणको छुटकारा मान ।
एउटा सुरक्षण१.२५.२००१मा खरीद गरिन्छ;परिपक्व मिति ११.१५.२००१ हो । मूल्य (खरीद मूल्य) ९७ हो छुटकारा मूल्य १०० हो दैनिक मौज्दात (आधार३) गणना गरिन्छ ,बन्दोबस्त (छुट) कति धेरै हुन्छ ?
=DISC("2001-01-25";"2001-11-15";97;100;3)ले करिब ०.०३७२ वा ३.७२ प्रतिशत फर्काउँदछ ।
वर्षहरूमा निश्चित ब्याज सुरक्षणको अन्तराल गणना गर्दछ ।
कुपन: वार्षिक कुपन ब्याज दर(ब्याजको अवास्तविक दर)
एउटा सुरक्षण१.१.२००१मा खरीद गरिन्छ;परिपक्व मिति १.१.२००६ हो । ब्याजको कूपन दर ८% हुन्छ । उपज ९.०% हो । ब्याज अर्ध वार्षिक (आवृति २ हो) भुक्तान गरिन्छ । दैनिक मौज्दात ब्याज गणना (आधार ३) प्रयोग गर्दा,समय) कति धेरै लामो हुन्छ ?
अवास्तविक ब्याज दर का लागि खुद वार्षिक ब्याजदर फर्काउँदछ ।
गणना अवधिको अन्त्यमा बाँकी ब्याजको रकममा अवास्तविक ब्याज सान्दर्भित गर्दछ । सङ्ख्या सहितको भुक्तानीहरू बनाउँदा उचित ब्याजहरू बढ्छ । अर्को शब्दमा किस्ताबन्दीहरूमा(उदाहरणका लागि मासिक वा त्रैमासिक) गणना अवधिको अन्त्य अगाडि ब्याज भुक्तानी गरिन्छ ।
NOM अवास्तविक ब्याज हो ।
Pप्रति वर्ष ब्याज भुक्तानी अवधिहरूको सङ्ख्या हो ।
यदि वार्षिक अवास्तविक ब्याज ९.७५% भएको खण्डमा चार वटा ब्याज भुक्तानी अवधि परिभाषित गरिन्छ । वास्तविक ब्याज दर (उचित ब्याज दर)कति हुन्छ?
अवास्तविक ब्याज दरको आधारमा ब्याजको उचित वार्षिक दर र प्रतिवर्ष ब्याज भुक्तानीहरूको सङ्ख्या गणना गर्दछ ।
नामांकन दर ब्याजको वार्षिक नामांकन दर हो।
५.२५% अवास्तविक ब्याज दर र त्रैमासिक भुक्तानीका लागि उचित वार्षिक ब्याज दर कति हुन्छ ?
=EFFECT_ADD(०.०५२५;४)ले ०.०५३५४३ वा ५.३५४३% फिर्तागर्दछ।
लगानीका लागि आन्तरिक प्रतिफल दर गणना गर्दछ । नियमित अन्तरालहरूमा मानहरूले नगद प्रवाह मानहरू प्रस्तुत गर्दछ, कम्तीमा एउटा मान ऋणात्मक (भुक्तानीहरू) हुन जरुरी छ र कम्तीमा एउटा मान धनात्मक (आम्दानी) हुन जरुरी छ ।
मानहरू एरेमा समावेश मानहरूको प्रतिनीधित्व गर्दछ ।
अनुमान (विकल्प) मान अनुमानित गरिन्छ । प्रतिफलको आन्तरिक दर गणना गर्न आकर्षित विधि प्रयोग गरिन्छ । यदि तपाईँंले केही मानहरू मात्र उपलब्ध गराउनु भयो भने इन्टरेसन सक्षम बनाउन सुरुको अनुमान उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
को मन्यतामा कक्षले A1=-१०००, A2=३५००, A3=७६०० र A4=१००० समावेश हुन्छ, सूत्र =IRR(A1:A4) ११.३३% को परिणाम दिन्छ ।
अपरिवर्तित प्रतिशोधन किस्ताबन्दीहरूका लागि ब्याजको तह गणना गर्दछ ।
दर आवधिक ब्याजदर सेट गर्दछ ।
अवधि ब्याजको गणनाका लागि किस्ताबन्दीहरूको सङ्ख्या हो ।
Total_periods किस्ताबन्दी अवधिहरूको जम्मा सङ्ख्या हो ।
लगानी लगानीको रकम हो ।
दुई वर्षे अवधि सहितको १२०,००० मुद्रा एकाइको क्रेडिट रकम का लागि मासिक किस्ताबन्दीहरू वार्षिक ब्याज दर १२% मा ब्याजको तह १.५ वर्षको हुन आवश्यक पर्दछ ।
ISPMT(1%;18;24;120000) = -३०० मुद्रा एकाइ । १.५ वर्ष पछाडिको मासिक ब्याज रकम ३०० मुद्रा एकाइ हुन्छ ।
नियमित भुक्तानीको श्रृङ्खलाहरूबाट लगानी प्रणालीको वर्तमान मान फर्काउँदछ ।
आजको निश्चित ब्याज दरमा आवश्यक लगानी गर्नुपर्ने नगदको रकम गणना गर्न यो प्रकार्य प्रयोग गरिन्छ, निर्दिष्ट रकम पाउनलाई वार्षिकीमा अवधिहरूको निर्दिष्ट सङ्ख्या पुगेको हुनुपर्दछ । तपाईँंले अवधिको समाप्ति पाछि कति रकम पाउन बाँकी हुन्छ भन्ने कुरा पानि निर्धारण गर्न सक्नु हुन्छ । यदि अवधिको सुरुमा र प्रत्येक अवधिको अन्त्य बुझाउनु पर्ने रकम भुक्तानी गरिएको खण्डमा सही रूपमा निर्दिष्ट गर्दछ ।
कि अभिव्यक्ति सङ्ख्याहरू वा सन्दर्भहरूको रूपमा ती मानहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, यदि उदाहरणका लागि, ब्याजदर वार्षिक 8% को दरले भुक्तानी गरिन्छ, तर यदि तपाईँं आफ्नो अवधिको रूपमा महिना प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने 8%/12 तल दर र LibreOffice क्याल्क स्वचालित रूपले ठीक तत्व सहित गणना गर्दछ ।
दर प्रत्येक अवधिको ब्याज दर परिभाषित गर्दछ ।
NPER अवधिहरू(भुक्तानी अवधि)को जम्मा सङ्ख्या हो ।
PMT प्रति अवधि नियमित गरिएको भुक्तानी हो.
FV (वैकल्पिक) अन्तिम किस्ताबन्दी बनिसकेपछि बाँकी भविष्यको मान परिभाषित गर्दछ ।
प्रकार (वैकल्पिक) ले भुक्तानीहरूको लगि बाँकी मिति जनाउँदछ । प्रकार्य = १ को अर्थ अवधिको सुरुमा बाँकी र प्रकार= ० (पूर्वनिर्धारित) को अर्थ अवधिको अन्त्यमा बाँकी भन्ने बुझिन्छ ।
यदि ५०० मुद्रा एकाइ मासिक भुक्तानी गरिन्छ र वार्षिक ब्याजदर ८% छ भने एउटा लगानीको वर्तमान मान कति हो ? भुक्तानी अवधि ४८ माहिना र २०,००० मुद्रा एकाइ भुक्तानी अवधिको अन्त्यमा बाँकी रहन्छ.
=PV(८%/१२;४८;५००;२०००) = -३५,०१९.३७ मुद्राएकाइ । नामांकित सर्तहरूको तल, ३५,०१९.३७ आजको मुद्रा एकाइ जम्मा गर्न जरुरी हुन्छ । यदि तपाईँं ४८ माहिनाका लागि प्रति माहिना ५०० मुद्रा एकाइ लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँं ले २०,००० मुद्रा एकाइ वर्षको अन्त्य सम्म छाड्नु पर्ने हुन्छ । क्रस चेकिङले ४८x मुद्रा एकाइ + २०,०००= ४४,००० मुद्रा एकाइ यो रकम बीचको फरक र ३५,००० मुद्रा एकाइ जम्मा गरिएका भुक्तानी ब्याज प्रस्तुत गर्दछ ।
यदि तपाईँंले सूत्र भित्र ती मानहरूको सट्टामा सन्दर्भहरू प्रविष्ट गराउनु भयो भने तपाईँं त्यो परिदृश्य"If-then"को कुनै पानि सङ्ख्या प्रविष्टि गराउन सक्नुहुन्छ । कृपया द्रष्टव्य:अचलहरू सन्दर्भहरूले निश्चित सन्दर्भहरूको रूपामा परिभाषा गर्न जरुरी हुन्छ । यो प्रकारका अनुप्रयोगहरूको उदाहरणले तल ह्रास कट्टी प्रकार्यहरू भेटाइन्छ ।
पाउनु पर्ने रकम गणना गर्दछ जसमा दिएको समयमा निश्चित ब्याज सुरक्षणका लागि भुक्तानी गरिन्छ ।
लगानी:खरीदको जम्मा ।
बन्दोबस्त मिति : फेब्रुअरी १५ १९९९९, परिपक्व मिति : मे १५ १९९९, जम्मा लगानी : १००० मुद्रा एकाइ , छुट: ५.७५ प्रतिशत,आधार: दैनिक ब्याज /३६० = २
परिपक्व मितिमा पाउनु पर्ने रकम तल दिएको अनुसार गणना गरिन्छ :
=RECEIVED("1999-02-15";"1999-05-15";1000;0.0575;2) ले १०१४.४२०२६६ फर्काउँदछ।
ले स्वचालित-घट्दोक्रम ह्रास कट्टी दर फर्काउँदछ ।
वस्तुको जम्मा बढेको ह्रास कट्टीको एउटा अवधिका लागि ह्रास कट्टी रकम गणना गर्न यो प्रकार्य प्रयोग हुन्छ । अंकगणितीय घट्दो क्रमको ह्रासले स्थिर जोड एक अवधिबाट अर्को अवधि सम्मको ह्रास कट्टी रकम घटाउँदछ ।
बचेको ह्रास कट्टी पछिको सम्पतिको मान हो ।
जीवन निश्चित समय भरिको अवधि हो जुन समयमा सम्पत्तिको ह्रास कट्टी गरिन्छ ।
अवधिगणना गर्नुपर्ने ह्रास कट्टीका लागि अवधि परिभाषित गर्दछ ।
एउटा भिडियो प्रणालीको परल मोल ५०,००० मुद्रा एकाइको वार्षिकरूपले ५ वर्षका लागि ह्रास कट्टी गरिन्छ । बचेको मान १०,००० मुद्रा एकाइ हुन्छ । तपाईँं पहिलो वर्षका लागि ह्रास कट्टी गर्न चाहनुहुन्छ ।
=SYD(५००००;१००००;५;१)=१३,३३३.३३ मुद्रा एकाई। पहिलो वर्षको लागि मूल्य ह्रास रकम १३,३३३.३३ मुद्रा एकाइ हो.
प्रत्येक अवधिका लागि ह्रास दरहरूको सिंहावलोकन गर्न ह्रास कट्टी तालिका परिभाषा गर्न आवश्यक हुन्छ । LibreOffice क्याल्कमा अर्को एक अर्कामा उपलब्ध फरक प्रकारका ह्रास कट्टी सूत्रहरू प्रविष्टि गर्दा तपाईँं कुन चाहिँ ह्रास कट्टी ढाँचा बढी उपयुक्त हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ । तालिकामा तलको अनुसार प्रविष्ट गर्नुहोस्:
५०,००० मुद्रा एकाइ
१०,००० मुद्रा एकाइ
१३,३३३.३३ मुद्रा एकाइ
१०,६६६.६७ मुद्रा एकाइ
८,०००.०० मुद्रा एकाइ
५,३३३.३३ मुद्रा एकाइ
२,६६६.६७ मुद्रा एकाइ
०.०० मुद्रा एकाइ
४०,०००.०० मुद्रा एकाइ
E2मा भएको सूत्र तल दिएको छ:
यो सूत्र स्तम्भ Eमा तल E11 (E2 चयन गर्नुहोस् ,माउसको साहायताले तल्लो दायाँ कर्नरबाट तल झार्नुहोस् ) प्रतिलिपि गरिन्छ ।
कक्ष E13 ह्रास कट्टी रकमहरूको जम्मा जाँच गर्न प्रयोग गरिएका सूत्रहरू समाहित गराउँदछ । यसले SUMIF प्रकार्य ऋणात्मक मानहरूको रूपमा E8:E11मा सोच विचार गर्न जरुरी हुँदैन । >० सर्त कक्ष A13 मा समाहित हुन्छ । सूत्र E13 मा तल दिएको हुन्छ:
१० वर्ष अवधिका लागि अहिलेको ह्रास कट्टी १ मुद्रा एकाइको बचेको मानमा वा फरक सुरुको लागत प्रविष्टि गराउँदा र यसरी नै ।
वित्तीय प्रकार्य खण्ड दुई
वित्तीय प्रकार्य खण्ड तीन
Title is: वित्तिय प्रकार्य भाग एक